Home Wararka Waa kuma Musharaxa uu Fahad ku bedelayo Cabdiwali Muudeey
Waa kuma Musharaxa uu Fahad ku bedelayo Cabdiwali Muudeey
Waxaa saacadihii u dambeeyay isa-soo tarayay guuxa doorashada kursiga sumadiisu tahay HOP#145 ee uu hadda ku fadhiyo Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey.
Sida ay ogaatay MOL, Kursigaan ayaa waxaa si gaar ah loogu xiray Maxamed-weli Cabdullaahi Sheekh oo uu Fahad Yasin ka keenay Australia.
Muhiimada u weyn ee loogu xiray kursigaan Maxamed-weli ayaa ah in uusan culeys ku noqon karin rabitaanka La-Taliyaha Amnigaa Qaranka Fahad Yaasiin, oo asagu raba in uu galo booska Muudey ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka.
Fahad iyo Muudey oo isku hayb ah ayaa loolan adag ku dhex-mari lahaa golaha, maadama uu Muudey markale difaacan lahaa booskiisa, waana sababta u weyn ee hadda loo dhaafinayo kursigiisa.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa goor sii horeysay loo diiday in uu ka duulo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde, si uu utago magaalada Baraawe oo ay taallo doorashada kursigiisa.
Diyaarad ka qaadi laheyd guddoomiye ku-xigeenka 1-aad garoonka Muqdisho ayaa lagu amray inaysan ka bixi karin, waxaana lasoo wariyay in saacado ku jireen Muudey iyo Ciidamo Ilaalo u ah qeybta VIP-da ee garoonka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in tallabada looga hor istaagay Muudey in uu ka dhoofo Muqdisho uu ka dambeeyo La-Taliyaha Amnigaa Qaranka Fahad Yaasiin, oo isagu hunguriyaynaya booskiisa.
Xulafada Farmaajo iyo Fahad ayaa isku-dey kasta u sameynay sidii ay u xaqiijin lahaayeen rabitaankooda ku aadan doorashada, gaar ahaan xildhibaanada loogu raadinayo xasaanad oo ugu horeeyo Fahad, oo raba in uu kamid noqdo guddoonka golaha.
Previous article[Daawo] Garbahaareey oo la shaaciyay in aanay Doorasho ka dhaceyn
Next articleMid kamida kooxaha dilalka ka geystay Punland oo sheegtay in la sixray
Dagaal beeleed dib uga soo cusboonaaday deegano ka tirsan Gobolka Sool